Zvigadzirwa vatengesi uye fekitori - China Zvigadzirwa zvigadzirwa
Hollow fiber hemodialyzer (yakakwira kubuda)
Mune hemodialysis, dialyzer inoshanda seyakagadzirwa itsvo uye inotsiva akakosha mashandiro enhengo yechisikigo.
Ropa rinoyerera nepakati kusvika makumi maviri emicheka yakaisvonaka, inozivikanwa se capillaries, yakasunganidzwa mupurasitiki chubhu ingangoita 30 masentimita kureba.
Iyo capillaries inogadzirwa nePolysulfone (PS) kana Polyethersulfone (PES), yakakosha epurasitiki ine yakasarudzika kusefa uye hemo inoenderana maitiro.
Pores mune iyo capillaries inosvina metabolic chepfu uye yakawandisa mvura kubva muropa uye woiburitsa kunze kwemuviri ne dialysis fluid.
Masero eropa uye mapuroteni akakosha anoramba ari muropa. Dialyzers anoshandiswa kamwe chete mune yakanyanya nyika dzakasimukira.
Kushandisa kwemakiriniki kweanoraswa mhango fiber hemodialyzer inogona kukamurwa kuita mbiri dzakateedzana: Yakakwira Flux uye Yakadzika Flux.
Hollow fiber hemodialyzer (yakaderera kubuda)
Ultrapure dialysate mafirita anoshandiswa kubhakitiriya uye pyrogen kusefa
Inoshandiswa pamwe chete neiyo hemodialysis chishandiso chakagadzirwa naFresenius
Icho chinoshanda musimboti ndeyekutsigira iyo isina mhango fiber membrane kugadzirisa dialysate
Hemodialysis chishandiso uye gadzirira dialysate inosangana nezvinodiwa.
Dialysate inofanira kutsiviwa mushure memasvondo gumi nemaviri kana zana ekurapwa.
Sterile hemodialysis maseketi eropa rekushandisa kamwechete
Iyo Sterile Hemodialysis Masekete Ekushandisa Kumwechete inonangana zvakananga neropa remurwere uye inoshandiswa kwenguva pfupi kwemaawa mashanu. Ichi chigadzirwa chinoshandiswa pakiriniki, ine dialyzer uye dialyzer, uye inoshanda senge reropa nzira mune hemodialysis kurapwa. Mutsara weropa unoburitsa ropa remurwere kubva mumuviri, uye iyo venous circuit inounza iro "kurapwa" ropa kumurwere.
Yakachena kuchena, kwete kudzikamisa.
Chiremba giredhi yakajairwa kugadzirwa, yakaoma mabhakitiriya kudzora, endotoxin uye inorema simbi yezvinyorwa, zvinobudirira kudzora dialysis kuzvimba.
Yakagadzikana mhando, chaiyo yevasungwa ye electrolyte, kuverengera kurapwa kwekuchengetedza uye nekuvandudza zvakanyanya dialysis mhando.
Sirasi sirinji yekushandisa kamwechete
Sterile Syringe yanga ichishandiswa mumasangano ekurapa kumba nekune dzimwe nyika kwemakumi emakore. Icho chigadzirwa chakakura chinoshandiswa zvakanyanya mu subcutaneous, intravenous uye intramuscular jekiseni kune varwere vekiriniki.
Takatanga kutsvagirisa nekuvandudza Sterile Syringe yeKushandisa Kumwe mu1999 uye tikapfuudza CE chitupa kekutanga muna Gumiguru 1999. Chigadzirwa chakavharirwa muhomwe imwe chete uye chakaiswa sterilized neethylene oxide isati yaburitswa mufekitori. Izvo ndezvekushandisa kamwechete uye kubereka kunoshanda kwemakore matatu kusvika mashanu.
Chinhu chikuru pane iyo ndeye Fixed Dose
Cold cardioplegic solution perfusion zvishandiso zvekushandisa kamwechete
Aya akateedzana ezvigadzirwa anoshandiswa kutonhorera kweropa, kutonhora cardioplegic mhinduro pefusion uye oxygenated ropa panguva yekushanda kwemoyo pasi pechiratidzo chakananga.
KN95 mweya wekufema
Inonyanya kushandiswa mune zvekurapa zvekurapa, murabhoritari, yekuvhiya imba uye nezvimwe zvinoda kurapwa nzvimbo, ine yakanyanya yakachengeteka chengetedzo chinhu uye yakasimba kuramba mabhakitiriya nemavhairasi.
KN95 Respirator kumeso kumeso maficha:
1.Mhino dhizaini dhizaini, inosanganisirwa nechimiro chechiso chechiso
2.Lightweight rakaumbwa mukombe design
3.Elastic nzeve-zvishwe zvisina kumanikidza kune nzeve
Disposable kuwedzerwa ropa seti inoshandiswa mukuendesa yakayerwa uye yakagadziriswa ropa kune murwere. Inogadzirwa nekirindindi yekudonhedza kamuri ine / isina vent inopihwa neyefaji kudzivirira kupfuura kwechero chigadziko mumurwere.
1. Tubhu nyoro, ine kusimba kwakanaka, kujekesa kwepamusoro, anti-ichitenderera.
2. Transparent yekudonhedza kamuri ine firita
3. Chena neIO gasi
4. Makuriro ekushandisa: pakupinza ropa kana zvikamu zveropa mukiriniki.
5. Mhando dzakasarudzika pakukumbira
6.Latex yemahara / DEHP yemahara
IV catheter infusion yakatarwa
Iyo yekurapa yekumwa yakachengeteka uye yakasununguka